Willpower တစ်ယောက်တည်းမလုံလောက်ပါ - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
တစ်ဦးတည်း Willpower အလုံအလောက်မဟုတ်ပါဘူး။
အတက်အကျအပိုင်း 1 ၏4YEAR တွင်
တစ်ဦးတည်း Willpower အလုံအလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ Willpower အရာအားလုံးသည်အခြားလူ့တူသောကုန်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ကအထက်ခြံစည်းရိုးများနှင့်လမ်းကြောင်းအသုံးပြုခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကွိုးစားအားထုရန်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူအများစုဟာမသိစိတ်လာပါတယ်။ ဒါကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိလစ်အသုံးချမှမဟာဗျူဟာများဖန်တီးခြင်းအကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအဓိကအပျြောအပါးကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါ, အဆာလိုတစ်ဦးကိုပယ်ရှိပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအကျိုးရှိသောအပျော်အပါးနှင့်အတူပျက်ပြယ်ဖြည့်မထားဘူးဆိုရင်, ထိုပျက်ပြယ်နောက်ဆုံးမှာဖြည့်ရပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့သင်တို့အဘို့ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဆိုပါပျက်ပြယ်ခဏငြင်းပယ်လျှင်ပျော်မွေ့တက်ပိတ်ဖို့ပေမယ့်ဘာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာအမှုအရာခက်ခဲစေလိမ့်မည်နည်း ကျွန်မရှေ့မှာကြောင်းအဓိကအပျြောအပါးရှိခြင်းမဟုတ်ကိုင်တွယ်စဉ်စုပေါင်းဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်မျိုးစုံ mini ကိုအပျော်အပါးများအသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြရန်ဟူသောဝေါဟာရကို "အပျော်အပါး stack" ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာအစကြောင့်အချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းမှာအခြားစွဲ စတင်. ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဤတွင်အကြှနျုပျ၏အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်းကြောင်းနေသောခေါင်းစဉ်:
ဘာဝနာ - ငါသည်ငါ့ဘာဝနာအလေ့အကျင့် (သတိဘာဝနာ) နှင့်ငါ၏အ abstinence အကြားရှင်းလင်းဆက်စပ်မှုဆွဲနိုင်ဘူး။ ဘာဝနာအမှုအရာအတော်များများ (သိပ္ပံနည်းကျသက်သေ) ပါပဲ။ ဒါဟာစိတ်အာရုံနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ တစ်စိတ်ကူးယဉ်သင်၏ဦးခေါင်းသို့ပေါ်လာတဲ့အခါ, သင်သည်ထိုပုံရိပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာတခြားနေရာသငျ့စိတျသှားပွီး refocus ပါစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လွန်ကဲကဲစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အခြားအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်တွေကိုလျော့နည်းစေသည်။ ပို. အရေးကြီးသည်ကသူတို့အားအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်တွေကိုအမှန်တကယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သူတို့နှင့်အတူပါသွားသောသူရပါဘူးနေကြသည်အရာကိုသင်ပိုမိုသတိထားမိစေသည်။ တှေးတောဆငျခွပြီးနောက်, စိတ်အမှုအရာအံ့သြဖွယ်ခံစားရနိုင်အောင်တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ရှင်းပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း - သင်၌ရက်အနည်းငယ်ရတစ်ချိန်က, သင်သဘာဝကျကျတစ်နည်းနည်းနဲ့အသုံးပြုစေလိုစွမ်းအင်ကိုတစ်ဦးအခြို့သောငွေပမာဏကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ လူတန်းစားပေါင်းစုံအဘို့သိမ်းယူရပါဘူးတဲ့ခွေးလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်မသုံးဘဲရူးသွားပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းဤမျှလောက်ပိုမိုလွယ်ကူငါ PMO မက (ထိုယလေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်) ကောင်းသောခံစားရရန်အဓိကအထောက်အကူလမ်းရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာ, အိပ်ပျော်ခြင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် (ကအိပ်ရာမှရတဲ့အခါ, လျင်မြန်စွာအိပ်ရဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသတိရ) နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ခံစားရသည့်အခါဖြစ်ပါသည် ကောင်းသော။
သွားလာခြင်း - ငါတစ်ခါတစ်ရံနေဆဲအုပ်စုတစ်စု settings ကိုငါမူကားများသောအားဖြင့်အစဉ်အဆက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ feeling နိုးထလာမယ့်နေ့ကသို့သွားမသက်မသာခံစားရသည်။ ကချစ်ခြင်းမေတ္တာ / ကွန်နက်ရှင်ဓာတုသောအာရုံကြော-transmitter ကို oxytocin နှင့်အတူလုပ်ဖို့င်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကိုကျိန်းသေဒီဆက်စပ်နေကြသည်။
Cuddle ရဲ့ရည်းစားကိုရယူပါ။ အကြောင်းပြချက်ကအထက်နဲ့အတူတူပဲ။ ကျွန်တော်ဒီလှည့်လည်လာတဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်၊ မကြာခဏကျွန်တော်တို့အတူတူတီဗွီကြည့်ရင်းအိပ်ယာဝင်ခဲ့ကြတယ်၊ နှလုံးသားကိုတကယ်နွေးပေးတယ် စကားမပြောဘဲတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အေးအေးဆေးဆေးနေလိုက်ခြင်းသည်ထိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သေးငယ်သည့်လုပ်ရပ်သည်နောက်ရက်များ၌ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်။
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒိုင်ယာရီ - ဤတစ်ကိုယ်တော် tools များအောက်ရှိ YBOP က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Fantastic သက်သေအထောက်အထားသင်ကကပ်ပါလျှင်ဒီရိုးရှင်းတဲ့အရာသည်သင်၏ခြုံငုံစိတ်ဓါတ်များတိုးတက်စေလိမ့်မည်ဟုပြသထားတယ်။
SMART ရည်မှန်းချက်များထားရှိခြင်း။ အကြောင်း, အတိအကျတိုင်းတာ, အောင်မြင်မှုများ, အတိုငျးနှင့်အချိန်ရည်မှန်းချက်များပါပဲ။ "ငါသည်နောက်တဖန်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုကြည့်မယ့်ဘယ်တော့မှမပေါ့" ဟုပြည့်မီနိုင်သည်မဟုတ်။ ဒါကြောင့်အမှုအရာ ... .. CHALLANGING စေသည်မျဉ်းမှာရည်မှန်းချက်ကိုထည့်လေ့မရှိသောကွောငျ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ 90 နေ့ကစိန်ခေါ်မှုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါဘူး။ ရုံတနင်္ဂနွေနဲ့တူနေတဲ့အချိန်မှာတိုတောင်းသောကာလကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့တစ်ပတ်သို့မဟုတ်ပဲပြောပါ "ငါ့ကိုမ, ကျေးဇူးတင်စကား" ငါမူကားငါ၏အမြို့ရိုးပေါ်မှာတစ် 90 နေ့ကဇယားရှိခြင်းပန်းတိုင်ခက်ခဲပေါ်လာနှင့်ငါ၏ Self-ယုံကြည်ချက်လျှော့ချလုပ်သင်သိရဖြစ်စေ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ဒီမှာအတှေ့အကွုံခဲ့ပွီးလြှငျ, ငါသည်ယခုတစ်ကြိမ်တနေ့သောအရာတို့ကို ယူ. (ကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံး၏နောက်ကျောများတွင် သိ. စဉ်ကဤအပြုအမူပြောင်းလဲမှုကိုအသက်အဘို့အကြောင်း) ကိုလက်ရှိအခိုက်၌ငါ့ကိုကူညီဖို့သို့မဟုတ်ဆီးတားနိုင်ရာပေါ်သာအာရုံစိုက်။
အိပ်ရာဝင်ချိန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် - သင့်အားနည်းချက်အခြေအနေများအိပ်ရာ related လျှင်နောက်တဖန်, 'သင်အိပ်ရာရောက်နေတစ်ချိန်ကတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်အိပ်ပျော်စေရန်နှင့်သင်နိုးထသောအခါဒါကြောင့်သင်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုညဥ့်အိပ်စက်မှုပေးဖို့ကူညီပေးသည်တဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုသတ်မှတ် လန်းဆန်းပြန်လည်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာအိပ်ရာထဲကရနိုင်။ A ကောင်းဆုံးညဥ့်အိပ်စက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ငါ့အဘို့အလွန်အရေးပါကြောင်းအရာတစ်ခုမှာမတိုင်မီစသည်တို့ကို 20 မိနစ်အိပ်ရာမသွားမီအကြောင်းကို 10 မိနစ်ချမီးကိုဖွင့်နှင့်ဖုန်းကဲ့သို့အလုံးကိုအီလက်ထရွန်းနစ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ပါပဲ။ ဤသည်ငါ့ကိုဆင်းသွားလေ၏။ ကျွန်မအိပ်ရာအချိန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုသုံးပါလျှင်အစဉ်မပြတ်ငါလန်းဆန်းနိုးထ။
self-hypnosis - သင်ဆဲ hypnosis မှော်သို့မဟုတ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်အချို့ကိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သောသူထိုလူတဦးတည်းဆိုရင်ကျနော်အချို့ကိုသင်ကပိုသုတေသနအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Hypnosis ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုကျယ်ပြန့်နှင့်အတူအံ့သြလောက်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အထူးသ porn အဘို့, iTunes ကိုအသံ downloads, အများစု, (ဒါပေမဲ့သူတို့သင်မကြာခဏနားမထောငျအထူးသဖြင့်လျှင်, အကူညီပြုပါက) hypnotherapists ရှုထောင့်ကနေအံ့သြဖွယ်မရှိကြပေ။ ဒါ့အပြင်သင်နည်းနည်းပိုပြီးကုန်ကျမည်ဖြစ်သော်လည်းတနည်းသင်သည်လူတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦး hypnotherapist သွားနှင့်တွေ့နိုင်ပါသည်စသည်တို့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ခြင်းသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလှုံ့ဆော်မှုများကဲ့သို့ PMO ကူးလင့်ထားသောအခြားကိစ္စရပ်များများအတွက်အသံ downloads, ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာအချိန်မှာ hypnotherapy ကျောင်းသားအဖြစ်ရှိသမျှတို့ကိုငါကုန်ကျစရိတ်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီနဲ့ရှာဖွေလျက်ကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ငါလုပ်ခဲ့တယ်သည့်အခါထို့နောက်အရာရာကိုပိုမိုလွယ်ကူတစ်ဦးသန်းကြိမ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင့်အတော်လေးရယ်စရာပါပဲ။
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးတတ်ပြီးပေါ်ထွန်းလာသောအခါလုပ်ဖို့? YBOP ထံမှဂယ်ရီကဲ့သို့သင်တို့အဖြူလက်ခေါက်ဆစ်ဒီမဟုတ်နိုင်ကဆိုသည်နှင့်တစ်ဦးတည်း willpower အပေါ်အားကိုး။ ဒီကိုကျော်လွှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း willpower ဘို့လိုအပ်ကြောင်းလျော့နည်းဖွယ်ရှိစေမဟာဗျူဟာများအပေါ်မှီခိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင် willpower ယခုအချိန်တွင်ကြုံတွေ့ရကျင့်ကိုကျင့်လျှင်သို့သော်ဒီမှာသင်အသုံးဝင်သောတွေ့ပါစေခြင်းငှါအချို့အရာဖြစ်ကြ၏:
1) ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖယ်ရှားပါ။ အခန်းသို့မဟုတ်အဆောက်အဦး Leave နှင့်သင်လျှင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ပြည်နယ်ပြောင်းလဲမှုကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဆဲသွေးဆောင်မှုရှိရင်တောင်ပေါ်မှာပြုမူရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုလျှော့ချထားသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များ၏ပြောင်းလဲမှုကိုပို, သင်ဖယ်ရှားပြီးပို။
2) တစ်ဦး drive ကိုအဘို့အသွားပါ။ ဒါဟာစိတ်အာရုံထွေပြားင်နှင့်ကားထဲတွင်ဂီတကိုလည်းကူညီပေးပါမည်
3) လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ပြေးရတာအဘို့အသွားပါ။ ဒီအကြောင်းအပိုစွမ်းအင်, လွှတ်ပေးရန်နဲ့အတူ Endorphins, serotonin နဲ့ dopamine အသုံးမည်ဖြစ်ပြီးသင်သည်သင်၏ဦးခေါင်းကိုရှင်းလင်းဖို့အချိန်ကိုငါပေးမည်။
4) စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရပ်-up, ဟာသ။ ကျွန်မ TV ကိုအကြံပြုသည်မဟုတ်သိကြပေမယ့်မတ်တပ်ရပ်-up, ဟာသကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်ကျွန်တော်ကိုမုန်းဖို့ကိုချစ်နာမည်ကြီးတွေသိမ်ငယ်အောင်နေဖြင့်ကောင်းသောခံစားရအောင်, ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်အရုပ်ဆိုးယောက်ျားတွေဖြစ်ပါတယ်။
5) 5-HTP ယူပါ။ ok, ဒါကြောင့်ငါလူတိုင်းကိုဤပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ 5-HTP တော်တော်များများ serotonin ဖြည့်စွက်သည်။ serotonin ကျွန်တော်တို့ကိုသာယာတဲ့နှင့်ပျြောရှငျနှင့်ပိုကြီးတဲ့ဆေးများအတွက်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်ဟုခံစားရစေသည်။
ငါလုံးဝဤပြဿနာကိုကျော်လွှားဖို့အဓိက tool အဖြစ်ဖြည့်စွက်အကြံပြုကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တစ်တွေလမ်းလျှောက်တုတ်တစ်စိတ်ကျန်းမာရေးဗားရှင်းနဲ့တူထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ခြေထောက်ထိခိုက်စေပါလျှင်အမှုအရာတကယ်ကြမ်းတမ်းနေ, သင်ပိုင်ခွင့်အထိဆက်နေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ အမှုအရာအနည်းငယ်ပိုကောင်း get အဖြစ်သင်အစစ်အမှန်ကုထုံး (ဒီအမှု၌တရားအားထုတ်, လေ့ကျင့်ခန်း, etc socializing) ပြုပါနှင့်ကုထုံးဆက်လက်နေချိန်မှာပြီးနောက်သင်လုံးဝသူတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ စဉ်ထို့နောက်သူတို့သည်သင့်ကိုထောကျပံ့ သငျသညျနေ့စဉ်သူတို့ကိုအသုံးချလျှင်သင်လွတ်လပ်ခွင့်၏အချက် defies ရာမှီခိုနှင့် Medical ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲကြိမ်မှာလမ်းလျှောက်တုတ်နဲ့တူပြုမူနိုင်ပါတယ်။ ဤပြဿနာကိုကြောင့်ဖြည့်စွက်ချို့တဲ့၏ဤအရပ်၌မရှိကြောင်းအတွက် YBOP ထံမှဂယ်ရီမှန်သည်။ ရုံကသတိထားကျေးဇူးပြုပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။
6) မျက်လုံးလှုပ်ရှားမှု Desensitization နှင့်သန့်စင်။ သငျသညျပြီးသားမသိကြပါလျှင်ငါဒါ Google ကအသေးစိတ်အတွက်အဲဒါကိုရှင်းပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာ (သင်အဓိပ်ပာယျအရာတစ်ခုခုကိုယုံကြည်ဖို့အသုံးပြုကြောင်းကိုအတု porn အရာကဲ့သို့) ဒါကြောင့်အခြားအမှုအရာတို့ကိုအာရုံမှဖယ်ရှားပစ်ရ Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်တော်တော်များများ Overload များအတွက်အာရုံကိုအသုံးပြုပါတယ်။
7) ဆုတောငျးပါ။ ကျွန်မယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်သင်တို့တွင်အချို့သောအဘို့ငါသည်ဤနှစျသိမျ့စေနိုင်ပါတယ်သေချာပါတယ်သကဲ့သို့ငါမကျင့်။ သင်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားတန်ခိုးနှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဤကိစ္စကိုဆက်စပ်နေလျှင်, ထိုမြင့်မားသောတန်ခိုးနှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်သင်၏နှလုံးနှင့်စိတ်ကိုတဖန်ချိတ်ဆက်ပေးနေသည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ခေါင်းရန်သင့်အရင်းအမြစ်များကိုခိုင်ခံ့စေမည်။
reboot ကာလအတွင်းလိင်ဆက်ဆံအပေါ်မှာငါ့အမြင်ကဘာလဲ? ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါသည်သင်တို့ကို ED ကနေပြန်လည်မရင့်လျှင်, အဘို့အသွားကြောင်းထင်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ကြောင်းအတိအကျဘာ; ဒီလောကအတွင်းအစစ်အမှန်အလှတရားတန်ဖိုးထားရန်။ ကြှနျတေျာ့တစျခုသတိထားအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံ reboot အဘို့သည်ကြီးစဉ်အခါ, ကမှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်ထိုသို့မျှော်လင့် sexting ဥပမာတစ်ခုအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။